Global Voices teny Malagasy » Tsy Tratran’i Rosia Ankehitriny Ny Fanantenana Mananiky Ny Avo Nofongarina Avy Ao Amin’ny Tahirin’ny Fotoana Nalevina Tamin’ny 1967 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Desambra 2017 17:46 GMT 1	 · Mpanoratra Alexey Kovalev Nandika nirinandrea
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Mediam-bahoaka, Tantara, Akon'ny RuNet
Mpiasa Sovietika iray , mandevina tahirin'ny fotoana teo amin'ny fototry ny tranoben'ny Orinasa iray, 1967 // Sary : Seryogin100, Wikicommons
DADA Dingana iray goavana ho an'ny Firaisana Sovietika ny 1967 : Ilay tsingerintaona faha 50 ny Revolisiona Goavan'ny Volana Oktobra (Araky ny ahafantaran'ny maro azy ao Rosia sy ireo firenena URSS teo aloha) izay nanova ny fizotry ny tantaran'izao tontolo izao mihitsy. Làlana an'arivony, orinasa maro ary andian-tafika maro manerana ilay firenena midadasika indrindra eto amin'izao tontolo izao no novàna anarana ho fahatsiarovana ilay Jobily.
Tao anatin'ireo fety maro nifanesy nandritry ny dimampolo taona lasa, an-jatony ireo tahirin'ny fotoana nalevin'ny mpianatra, fikambanana mpiasa ary vahoaka Sovietika nanerana an'i URSS, narahana torolàlana hamongàrana azy ireny indray afaka 50 taona katroka, amin'ny faha-zato taonan'ny revolisiona.
Niaraka tamin'ny mpitsoka mozika, maro ireo tanàna sy renivohitra Rosiana ary Sovietika teo aloha no voatery nanao izany.
Ny andron'ny faha-zato taonan'ny Revolisionan'ny Oktobra, nosokafan'ny tananàn'i Penza ireo tahirin'ny fotoana nalevina ny taona 1967 sy ny 1977 izay mirakitra hafatra ho an'ny taranaka fara aman-dimby.
Toa nandiso fanantenana ireo Rosiana miaina ny taona 2017 anefa ny rakitra hita ao.
Ireo hafatry ny taona 1967 dia noraisina ho tsotra be, feno fanantenana sy feno fijery miabo. Resy lahatra ireo nanoratra azy ireny fa amin'ny taona 2017 dia ho maro ny aretina hofongana tanteraka, ho tantara ihany sisa ny ady ary ireo Kaominista mpanjanaka any amin'ny hoavy dia mety efa hanjanaka ny habakabaka. Iray amin'ireo hafatra hita tao anatin'ny tahirin'ny fotoana noloharana tao Murmansk, tanàna avaratr'i Rosia no nanambara fa :
Nanao ny dingana voalohany fotsiny ihany izahay nandeha teny an'abakabaka, ary mety efa nisidina eny amin'ny planeta hafa angamba izao ianareo amin'izao. Mety efa nahita ny zavamiafin'ny natiora izay mbola tsy hainay akory, nahafolaka ny herin'ny zava-boahary hanaiky anareo ihany koa, nahay nanova ny toetrandro ary nanamboatra ny faritry ny tendrontany ho zaridaina mahafinaritra… Tsarovy izahay, razambenareo, izay nametraka ny fototry ny tanàna itoeranareo ary namoy ny ainy niady hisian'ny Kaominisma…
Ary nisy iray hafa tao Serov nilaza hoe:
“Mitsiriritra anareo izahay, ry tanora taranaka kaominista rahampitso” : sekoly iray tao Serov nanokatra ny tahirin'ny fotoana
Angamba ny tena niandrandra be indrindra ny hoavy dia ity hafatry ny taona 1967 tao Novosibirsk ity:
Mino izahay fa karakarainareo tsara io planeta tany mangantsika io, zanahanareo ny Volana ary mipetraka eny amin'ny planeta Martsa ianareo, ka manohy mizaha ireo planeta, zavatra izay efa natomboky ny olona taty amin'ny dimampolo taona lasa, ary efa mifamezivevy eny amin'ny habakabaka eny ny sambondanitrareo.
Mino koa izahay fa efa mifampiraharaha ny ara-tsiantifika sy ara-kolotoraly amin'ireo solontena hafa, avy amin'ny sivilizasiona ivelan'ny tany ianareo. Mino izahay fa mbola hanohy ny ady ary hivoaka ho mpandresy tahaka ny efa natomboky ny rainareo sy raibenareo tamin'ny dimampolo taona lasa sy mbola notohizanay ianareo. Mifalia, ry taranaka malalanay !
Tsy ny hafatra rehetra akory no manentana fanahy tahaka izany – tao ireo maizimaizina sy malina, nampahafantatra ireo Kaoministin'ny hoavy tamin'ny antsipirihany mikasika ireo atody an-tapitrisa novokarin'ny toerana fiompian-dry zareo akoho amam-borona tamin'ny 1967 na koa ny herinaratra isanora navoakan'ny orinasa mpamatsy herinaratra tamin'izany. Tsy vitsy ireo mpampiasa ny filazambaovao sosialy no nalaky nihomehy ilay fahatsiarovana Sovietika :
Navoakan'ny Penzainform [tranonkalam-baovao ao Penza] ny votoatin'ny tahirin'ny fotoana iray tamin'ny taona 67 mikasika ny ronono novokariny sy ny herinaratra lany isanora tamin'izany, nihomehy aho namaky ity fanamarihana ambany ity : “Nafointsika ny firenena goavana tahàka izany”
Androany aho nanatrika fotoam-panokafana tahirin'ny fotoana iray nisy hafatra ho an'ny taranaka hoavy, rehefa namaky ilay hafatra nampangitakitaka izy ireo, nivanitika ireo tanora, nitomany ny lehilahy lehibe iray ary nahatsiaro tena ho menatra aho.
Ny fahatsapana henatra manindrona noho ireo famadihana (faniratsiràna) ny fanantenan'ny raibe sy reniben'izy ireo no toa manenika ny filazambaovao Rosiana. Fanehoankevitra maromaro mahasolo tena ny hafa tao amin'ny Twitter no mivaky hoe :
Naleoko tsy nosokafan'izy ireo ireny tahirin'ny fotoana ireny. Henatra izao
Ry zareo mpikambana tao amin'ny Komsomol [Fikambanan'ny Tanora Kaominista] izay nanoratra ireo taratasy natao ho an'ny taranaka ireo ihany no mamaky ny rakitra tao anatiny. Ahoana ny hevitrao, fantatr'izy ireo ve fa izy t*y ihany no nanakorontana izao rehetra izao?
Izany angamba no manazava ny antony tsy hanokafan'ireo tanàna sasany intsony ireo tahirin'ny fotoana any aminy. Gazety iray ao an-toerana ao Shakhty avaratr'i Rosia no nibitsika hoe :
Toa tsy tan'ny rehetra ny hafatra iray ho an'ny taranaka fara aman-dimby avy ao Shakhty : tsy misy te-hanokatra tahirin'ny fotoana intsony [FANADIHADIANA]
Ny lahatsoratra nivoaka mifandray amin'ilay bitsika dia milaza fa nanatona ireo manampahefana tao an-toerana ny mpanao gazety, saingy nandamoaka ny fangatahan'izy ireo hanokatra ilay tahirin'ny fotoana. Na izany aza, navoitran'ny fanadihadihana notanterahin'ilay gazety fa ny ampahany betsaka amin'ireo mpamaky azy (85 isan-jato tamin'ny fotoana nanoratanay) no nankasitraka ny hanokafana ny tahirin'ny fotoana : “Tantarantsika io.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/25/110308/
 7 ноября 2017 г.: https://twitter.com/Saveliev_VP/status/927869680722825216?ref_src=twsrc%5Etfw
 7 ноября 2017 г.: https://twitter.com/Newesprod/status/927909606797594625?ref_src=twsrc%5Etfw
 7 ноября 2017 г.: https://twitter.com/nvm_lj/status/927898082540433408?ref_src=twsrc%5Etfw
 7 ноября 2017 г.: https://twitter.com/pinega12/status/927922903991160832?ref_src=twsrc%5Etfw
 7 ноября 2017 г.: https://twitter.com/spacelordrock/status/927975240327712768?ref_src=twsrc%5Etfw
 7 ноября 2017 г.: https://twitter.com/1964Matov/status/927935489604227072?ref_src=twsrc%5Etfw
 8 ноября 2017 г.: https://twitter.com/wwwkvusu/status/928217654384648192?ref_src=twsrc%5Etfw